Madaxweyne Ku xigeenka Jubbaland oo sheegay inay joogaan goob ay kala dagaalami karaan Ciidanka DFS | Mudug24
Madaxweyne Ku xigeenka Jubbaland oo sheegay inay joogaan goob ay kala dagaalami karaan Ciidanka DFS
Waxa uu sheegay inay ku sugan yihiin goob ay isaga difaaci karaan Ciidanka dowladda Federalka Somaliya.
“Waxaan ku sugannahay xaduuda u dhaxeyso Mandheera iyo Beled Xaawo oo ah dhulka la yiraahdo No man’s land, waxaan kusoo booqday ciidanka dowlad goboleedka Jubaland oo aaggaas joogaa”, ayuu yiri Maxamuud Sayid.
Wuxuu intaa raaciyay in ciidankii Jubaland ee dhawaan halkaas dagaal ku galay ay ka guureen xeradii ay markii hore deganaayeen, waxaana uu yiri.
“waxaan u guurnay xero kale oo isla halkii ah maadaama kii hore uu ahaa goob ay deganaayeen dad rayid ah, kan hadda aan degannahayna waa mid goobaha shacabka ka fog oo haddii nala soo weeraro aan isku difaaci karno”.
Previous articleMaxey tahay u jeedka Socdaalka Hoggaanka Ahlusunna ee Garoowe?
Next articleMadaxweynihii hore ee Somaliya Xasan Sheekh oo shaaciyey sababta ay Madasha Xisbiyada ugu midoobayaan hal xisbi